Gacan ku dhiigle kufsi iyo dil ka geystay G/Shabeelaha Hoose oo la qabtay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Gacan ku dhiigle kufsi iyo dil ka geystay G/Shabeelaha Hoose oo...
Taliska Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay fal isugu jiray kufsi iyo Dil Gabar yar loogu geystay deegaanka Calamada ee Gobolka Shabeellaha Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in eedeysanaha oo falkaasi qirsan gacanta lagu soo dhigay, isla markaana haatan lagu haayo xarunta Hay’adda dambi barista ee CID-da si baaris dheeraad ah loogu sameeyo, kadibna Maxkamad loo geeyo.
Dadka deegaanka Calamada ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa aad u hadal haaya dhacdada aadka u foosha xun ee halkaas ka dhacday laguna kufsaday Gabar yar oo 8 sanno jir aheyd, kadibna la dal-dalay, waxaana horey deegaano ka tirsan dalka uga dhacay falkaan oo kale.
Maqaal horeMaxay kawada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirka Difaaca ingiriiska ?
Maqaal XigaKenya oo soo dhoweysay Warbixintii IGAD ( War-Saxaafadeed)